आज मंगल ग्रहमा नासा रोभरको अवतरण, ठूलो भाई 'इनसाइट' स्वागत छ, यो कसरी सम्भव भयो जान्नुस्:- TokhaLive
एजेन्सी / अमेरिकी अन्तरिक्ष एजेन्सीको अन्तरिक्ष यान आज १८ फेब्रुअरीमा मंगल ग्रहको सतहमा उत्रिनेछ। नासा पर्सिभेन्स रोभर पनि मंगल ग्रह पुग्न धेरै कठिनाइहरूको सामना गर्न सक्छ। यी समस्याहरू यस्ता हुन्, जसमध्ये केही पर्सिस्टन्भ रोभरले नै समाधान गर्नुपर्नेछ, तर उसको जेठो भाइ पहिले नै मंगल ग्रहमा तैनात छन्। जसले उनलाई मंगल ग्रहको सबैभन्दा ठूलो समस्याबाट बचाउनेछ। आउनुहोस्, जान्नुहोस् कि समस्याहरूको हठमा के हुनेवाला छ? अनि उसको ठूलो भाइले उसलाई कुन समस्याबाट बचाउँछ? (फोटो: नासा) २/१२
मंगल ग्रहमा अवतरण हुनुभन्दा आधा घण्टा अघि नासा पर्सिएरन्स मार्स रोभरको गति प्रतिघण्टा ८० हजार किलोमिटर प्रतिघन्टा हुनेछ। यो ३० मिनेटमा यो स्तरमा कम गर्नुपर्दछ ताकि यो मंगल ग्रहमा छिटो खडा हुँदैन। यो पहिलो समस्या हो। दोस्रो सबैभन्दा ठूलो समस्या तातो/ गर्मिको हो। (फोटो: नासा)
मार्सक्वेक्स मार्स इनसाइट नासा पर्सिभेन्स रोभर
नासाको दृढता मार्स रोभरले घर्षणको कारण १००० डिग्री सेल्सियससम्म तापक्रमको सामना गर्नुपर्दछ किनभने यो मंगल ग्रहको वातावरणमा प्रवेश गर्दछ। यस बाहेक, मंगल ग्रहको खाडलमा ऊ अवतरण गर्दै छ जेजरो क्रेटर। (फोटो: नासा)
जेजरो क्रेटरसँग गहिरो उपत्यका, तीक्ष्ण हिमालहरू, पोखरी चट्टानहरू, बालुवा टिब्बा र ढुगाको समुद्र छ। यस्तो अवस्थामा, विश्वका वैज्ञानिकहरू लगनशील मार्स रोभरको अवतरण कति सफल हुनेछ भन्नेमा केन्द्रित छन्। (फोटो: गेट्टी)४/१२
मार्सक्वेक्स मार्स इनसाइट नासा पर्सिभेन्स रोवर
अब जेठो भाईतिर आउनुहोस् जो आफ्नो रातो ग्रहमा मंगल ग्रहमा पर्सिएरन्स मार्स रोभरको लागि पर्खिरहेका छन्। यस ठुलो भाइको नाम मार्स इनसाइट हो। यो नासा रोभर हो, जुन अमेरिकाले नोभेम्बर २०१८ मा मंगल ग्रहको सतहमा पठाएको थियो। (फोटो: गेट्टी)
मार्स इन्साइटको एउटा मात्र कार्य छ, यो भनेको गर्भको सतह र गर्भमा भैंचालोको बारेमा जानकारी दिनु हो। नोभेम्बर २०१८ देखि, यसले लगातार मंगल ग्रहमा भैंचालोको बारेमा सूचना संकलन गरेर नासालाई सूचना पठाउँदै छ। जब परसिएरन्स मार्स रोवर मंगल ग्रहको सतहमा अवतरण हुन्छ, इनसाइटले नासा र लगानी दुबैलाई बताउँछ कि यसको अवतरण स्थलमा कुनै भूकम्प हुनेछैन। (फोटो: गेटी)६/१२
जसरी भूकम्पलाई भूकम्प पनि भनिन्छ, भूकम्पलाई मार्क्सकेक पनि भनिन्छ। २०१९ मा, मार्स इनसाइटको टोलीले पहिलो पटक विश्वलाई भने कि मंगल ग्रहमा पनि भूकम्प गयो। यद्यपि यी भूकम्पहरू पृथ्वीको भूकम्प भन्दा केही फरक छन्, ती कस्तो किसिमका भूकम्पहरू अझै एक रहस्य नै छ ।फाेटो: गेटी)
पृथ्वीमा भूकम्प मापन गर्न हजारौं केन्द्रहरू निर्माण गरिएको छ। मंगल ग्रहमा त्यहाँ एउटा मात्र केन्द्र छ। जुन मंगल ग्रहको अन्तर्दृष्टि भनिन्छ। त्यसकारण, त्यहाँ भूकम्पहरू पत्ता लगाउन बढी गाह्रो छ। भर्खरै इनसाइटले मार्समा आफ्नो पहिलो जन्मदिन मनायो। त्यो पनि दुई बर्ष पछि किनभने मंगल ग्रहको एक दिन पृथ्वीको दुई दिन बराबर छ। यसको मतलब पृथ्वीको ६८७ दिन जति छ। (फोटो:गेटी)८/१२
९ / १२
यस समयमा, इनसाइटले मंगल ग्रहमा सयौं भूकम्प चालहरू रेकर्ड गरेको छ। तर यो कहाँ, कत्तिको गहिरो वा कत्तिको तीव्र भूकम्प थियो भनेर भन्न सकेन। तर इनसाइटले नासा पर्सिभेन्स मार्स रोभरको अवतरणको क्रममा यसको काम गर्छ। यो दृढता मंगल ग्रहको सतहमा तल आउने बित्तिकै, अन्तरदृष्टि को मैदानमा कम्पनले भाइ सुरक्षित रूपमा अवतरण भएको देखाउनेछ। (फोटो: गेटी)
जब कुनै वाहन सतहमा अवतरण हुन्छ, त्यहाँ तीन प्रकारका भूकंपीय गतिविधिहरू हुन्छन्। पहिलो- यदि अचानक सवारीको गति धीमा भयो भने त्यसले ध्वनिगत बूम निम्त्याउनेछ। यसबाट उत्पन्न हुने शॉकवेभले भूकंपीय गतिविधिलाई निम्त्याउँदछ। दोस्रो, वातावरण उस्तै सोनिक बूम ग्रहण गर्दछ भने पनि, यो एक पर्याप्त दूरी को लागी कंपन पैदा गर्दछ। तेस्रो – जुन सबैभन्दा प्रमुख हो। (फोटो: गेटी)१०/१२
तेस्रो, भूकंपीय गतिविधि लैंडिंग अनुक्रमको बखत हुन सक्छ, जब दृढताले दुई भारी रोभरहरू तल लिन्छ। यो क्रूज मास सन्तुलन उपकरणहरू (CMBDs) मार्फत नियन्त्रण गरिनेछ। यस समयमा यसको गति प्रति घण्टा १००० किलोमिटरको हुनेछ। यसको जेट इन्जिनको कारण, मंगलग्रहको सतहमा पनि खाडल गठन गर्न सकिन्छ। जियोथर्मल गतिविधि पनि हुनेछ। (फोटो: नासा)
२५ जेष्ठ २०७८, मंगलवार ०५:४१
अनियन्त्रित चिनियाँ रकेट अन्तरिक्षबाट पृथ्वीतर्फ खस्दै:-
२५ बैशाख २०७८, शनिबार १९:१५